Soosaarayaasha Xayawaanada dhogorta dareemay - Shiinaha Alaab-qeybiyeyaal Xayawaan ah, Warshad
Handcraft wuxuu dareemay bisadaha dugsiga
Sababaha lagula taliyo Ma taqaan sababta bisadahaagu u qurux badan yihiin oo u caqli badan yihiin? Maxaa yeelay kulligood way waxbarteen! Waxa aad ku aragtay “Handiwork” maanta waa isku mid bisadaha taxanaha ah ee loo yaqaan 'cat'. Farsamada gacanta lagu sameeyo ayaa ka dhigaysa bisad kasta oo aad leedahay mid gaar ah! Kaalay, raadso lammaane bisaddaada!
Dareemay dhogor Baaskiil xayawaan qurxin
Sababaha lagula taliyay Ma xasuusataa filimkii kartoonada ahaa "Zootopia" ee adduunka xaaqay sanadkii 2016? Weligaa ma qiyaastay in xayawaanku ay raacaan baaskiilada sidayada oo kale? Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa taxanahayaga xayawaan ee la dareemo. Mr. elk oo qurux badan, Mr. Cool Mr. Rhinoceros Mr. Gerira oo jilicsan, Miss alpaca iyo daanyeer xariif ah ayaa dhammaantood wada saaran baaskiil duug ah si ay kuu salaamaan. Maxaa khibrad cajiib ah? Xullo badeecadaha ugu iibinta wanaagsan xilligaas!
Dareemay qurxinta beaver kalluumeysiga
Sababaha lagu talinayo Beaver waa noocyo fara badan oo jiir ah, oo ka tirsan xayawaanka biyaha ku jira, ee ku nool woqooyiga cidhifka aagga qabow, oo ku noolaan kara barafka hoostiisa. Dunida waxaa ka haray labo nooc oo kaliya: mid waa Beer-ka Mareykanka, oo loo qeybiyo waqooyiga Mareykanka, Canada iyo Alaska, iyo midka kale oo ah beer-laawe ku nool Eurasia, waqooyiga Aasiya iyo Yurub. Maanta waxaan kugula talineynaa seddex beeri oo ka yimid Kanada. Dhammaantood waxay jecel yihiin inay cunaan kalluunka waxayna ku fiican yihiin kalluumeysiga. The ...
Qurxinta idaha qurxoon
Sababaha talosiinta Qoys ka mid ah adhiga gacanta lagu sameeyo ee dhogorta leh ee dhogorta leh ayaa ah kooxda ugu caansan dhammaan dhogorteenna la dareemay taxanaha idaha. Waxay yihiin aabe aabe, hooyada adhiga, walaalka idaha iyo walaasha wan. Kaydka 'Keepsake' ee qoysku waa dawan maar. Caleemaha Cagaaran ee Cagaaran wuxuu ku darayaa taabashada Kirismaska. Qoyska quruxda badan ee idaha ayaa u qalma inay iibsadaan guri hadiyad ahaan fasax kasta
Noocyo gacmeed qurux badan oo gacmeed lagu sameeyay ayaa dareemay badmaaxyo ey
Qurxinta, Qurxinta Guriga, Darbiga Farshaxanka, Qurxinta Kirismaska, Qurxinta, Qurxinta gidaarka,